Kukarukureta namakoronga kana inoerera
Dzemaitirwe pamusoro Vhoriyamu mugoronga
Kureba mugoronga L
L - zvachose urefu pemigero kana kumigero
A - upamhi pamharadzano
B - pasi upamhi
H - goronga udzamu
Chirongwa ichataura inzwi uye pose nzvimbo mugoronga.
Kana kufara pamusoro uye nechepasi mugoronga vakasiyana, rinokosha vhoriyamu zvatowedzera yakagadzirwa C uye bhuku mawere D.
Nokuti kuvakwa kukurukurirana, zvikwepa kudziyisa, sewers kana nekuisa kanyika nheyo kwaunogara ungafanira akachera mugoronga. Unogona kukoka nezvokurara kuita, asi unogona kuita basa pachako. Asi chokwadi, zvose nguva unofanira kuziva zvimwe zvinoitwa mugoronga. Get navo uchabatsira purogiramu yedu. Pachishandiswa kureba, upamhi nokudzika mugoronga, izvozvo anosarudza yayo vhoriyamu uye pose nharaunda. Pane zvakaitika apo upamhi kumusoro uye nechepasi mugoronga akasiyana, uye achava kubatsira vhoriyamu akaverenga dzakatenuka. Dzemaitirwe pamusoro Vhoriyamu mugoronga kuchakubatsira kwete chete kuti kugarwa basa ravo, asi kuti ngaaverenge mutengo nyika mabasa, kana ukasarudza kushandisa basa unyanzvi.
Kune zvitatu nzira kuchera kuhondo. Izvi muchipindura pemigero noruoko, noruoko kana trencher trencher.
nyaya yokutanga kazhinji chikauya ipapo, pasina kuwana chaihwo zvokushandisa. Ichi nzira nokururamisira unoparadza nguva-of trenching, izvo chinobata zvikuru kunaka ivhu.
Hand trenchers kudimbudzira nguva mabasa akadai. Inogona kutengwa kana dzokurenda. Unogona rayirai muchipindura yacherwa vari unyanzvi yakasimba. Ipapo anoita nyanzvi.
The Excavator rinoshandiswa apo panzvimbo yacho inogona kutyaira michina kuvaka, uyewo pane yakawanda basa. Usati kurenda backhoe anofanira kutsvaka upamhi mumugero pasi kunhonga motokari pamwe kukura mugomo unoenderana payo.
Kana ukasarudza kuchera mugoronga pachako, kutanga unofanira kuziva kuti zvinoda mumwe kudzika mugoronga kuti mhando dzakasiyana basa. Saka, somuenzaniso, kuti amudanire netambo, kazhinji anochera mumugero kudzika vanenge 70 cm. Uye tsvina kunoda yakadzika mugoronga. Zviri hunodiwa kuti ichi chaiva nehafu mita kudzika kupfuura kudzama ivhu oma.
On upamhi negorongawo rinokanganisa mhando basa rinoitwa. Shoma upamhi mugoronga kunoyerwa pamwe nechepasi uye anofanira kuenzaniswa mhando uye kukura ukapisa murwi pombi mairi.